श्रीमतिलाई खुशी पर्न नसकेर खटपट त परेको छैन ? त्यसो हाे भने यस्ता छन श्रीमति खुशी पार्ने २० सुत्रहरू ! हरेक पुरूषले अवस्य प-ढ़नुहोला – KhabarTime
महसुल नतिर्नेहरूको अबदेखि बिजुलीको लाइन काटिने
श्रीमतिलाई खुशी पर्न नसकेर खटपट त परेको छैन ? त्यसो हाे भने यस्ता छन श्रीमति खुशी पार्ने २० सुत्रहरू ! हरेक पुरूषले अवस्य प-ढ़नुहोला
एजेन्सी । नेपाली समाजमा थुप्रै कारणहरुले डि’भोर्सको घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । कतै तपाईले आफ्नो श्रीमतीलाई खुसि पर्न नसकेर तपाईको परिवारिक जीवनमा खटपट त परेको छैन ? श्रीमतीलाई खुसी बनाउने २० सुत्रहरु अपनाउनुभयो भने तपाइको दाम्पत्य जीवन सफल हुन सक्छ ।
ल हेर्नुस यस्ता छन् केहि टिप्सहरू…
१ – श्रीमतीको मूडको ख्याल राखेर ब्यवहार गर्ने। २ – श्रीमतीका कुरा सुन्ने र सकेसम्म् उनको माग अनुसारको सपिङ गर्ने। ३ – श्रीमतीले बोलेको जोक्समा हास्ने र दुःखको कुरा गरे, हो मा हो मिलाउने। ४ – कस्लाई भेट्न गएको फोटो खिंचेर श्रीमतीलाई पठाउने।
आफ्नो जन्मबार र राशि अनुसार तपाइले कति धन कमाउनु हुन्छ ? जान्नुहोस
२०७७ साल असार १९ गते शुक्रबार, हेर्नुहाेस् राशिअनुसारकाे तपाईहरूको भाग्य